अन्तत बाहिरियो भागरथीको पोष्टमार्टम रिपोर्ट! के हाेला अब? – Wow Sansar
February 9, 2021 85
Prev४ घण्टासम्म कुरा गरिन् अनि दिइन् माफी
Nextमाझी बस्ती निर्माणबाट श्वेता खड्काले हात झिकिन्, मेयर भन्छन्– ऋणमा डुबेको छैन
का’टिएको हात खुट्टामा जोडिदिए पछि… (1482)
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य ! (1234)
भर्खरै भयो मुटु कापने दु,र्घटना आमा र छोराको घटनास्थलमै मृ,त्यु (1178)
उडान बन्द गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा (1143)
गगन थापामाथि लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप, पक्राउ गर्ने तयारी ? (1122)
कञ्चनपुरकी यी युवतीले फेसबुकबाट केटासँग लब गर्दा काेठामा लगेर घीनलाग्दाे हर्कत गरी बनाईदिए यस्ताे बिजाेग.. (1046)